Ny tsara indrindra 24 Jesus Tattoos Design Idea ho an'ny lehilahy sy vehivavy - Tattoo Ideas Art
Ny tsara indrindra 24 Jesosy Tattoos Design Idea ho an'ny lehilahy sy vehivavy
sonitattoo Novambra 19, 2016
Raha mpivavaka ianao ary te hanana tatoavina miavaka izay hiresaka bebe kokoa momba ny finoanao, ny tatoazy Jesosy dia mety ho tatoazy lavorary ho anao raha Kristianina ianao. Ny tatoazy dia tsy maninona raha lahy na vavy ianao, mifanaraka tsara amin'ny rehetra.
1. Ny tato an-tonta nataon'i Jesosy ho an'ny lehilahy
2. Tati-tati-teti-pon'i Jesosy ho an'ny soroka
Ny tatoazy nataon'i Jesosy dia lasa iray amin'ireo tatoazy izay azo ampiasaina hilaza amin'ny hafa ny halalin'ny fahatsapanao ny finoanao. Ny soroka dia toerana malaza izay ahafahana maneho ny tati-kevitr'i #Jesus tsara indrindra.
3. Ny tontolon'i Jesosy tatoazy dia mamorona hevitra ho an'ny zazavavy
Tsy misy olona iray tsara kokoa raha i Jesosy #tattoo no voasokitra tanteraka amin'ny soroka. Ny toerana eo an-tsoroka dia mampivelatra sy mahafinaritra ho an'izay mahita azy.
4. Tora-tehaka Jesosy tato an-doko ho an'ny lehilahy
Ny tatoazy Jesosy dia azo apetraka eo amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana. Na izany aza, ny soroka dia mety ho toerana tsara ho an'ny tatoazy.
5. Tato an-tontalin'i Jesosy ho an'ny vehivavy
Azonao atao ny manantena fa izay rehetra mahita an'io tato-tehaka io dia hankasitraka ny finoanao. Ahoana ny hevitrao momba ny fampiendrehana ny tatoazy?
6. Teto mahagagan'i Jesosy teo amin'ny soroka
Ny tatoatan'i Jesosy dia azo zaraina amin'ny fomba toy izany rehefa feno ny soratr'i Kristy rehefa feno ny soroka.
7. Sangisangy ny tato -dika nataon'i Jesosy amin'ny lehilahy
Ny tatoazy Jesosy dia azo soratana amin'ny lamosin'ny soroka mba hanomezana anao ny toky omenao. Ny fametrahana an'ity tatoazy ity dia afaka manafina azy raha toa ianao ka karazana olona izay te-hitazona ny mombamomba anao manokana.
8. Super tato teti-damosin'i Eva eo amin'ny soroka vavy
Ny soroka feno dia afaka mitondra an'i Jesosy miaraka amin'ny tatoazy. Ny endrika #art dia tena tsara indrindra amin'ny vatan'ny vehivavy.
9. Toro-tehaka nataon'i Jesosy tatoazy
Tsy tianao ve ity teboka nataon'i Jesosy tatoazy ity? Ny tatoazy Jesosy dia nanjary tian'ny olona rehetra mpino ny tatoazy.
10. Tombantombana mahagaga nataon'i Jesosy
Ny fomba ahafahanao manova ny tatoatanao dia maro. Isaky ny te hampiditra ny tatoazy ianao dia afaka manampy anao amin'ny vatanao.
11. Tetikasa manintona tato anaty Jesosy
Ny tatoazy Jesosy dia azo alaina amin'ny dikan-teny samihafa. Ny asanao amin'ny maha-mpampiasa anao dia manapa-kevitra ny amin'ny fomba tianao hijerena ny tatoazy toy ny teny nosoratana raha tianao.
12. Kanto indrindra ny tato an-tato amin'ny Jesosy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ny tatoetin'i Jesosy dia azo aseho amin'ny endrika maro tahaka izao. Azonao atao ny manao azy manokana araka izay tianao hatao na ny hafatra tianao handehanana.
13. Vehivavy mitaiza an'i Jesosy Ink Idea
Ny vehivavy dia mankasitraka ny tati-tiana mahafinaritra nataon'i Jesosy miaraka amin'ny voninkazo marevaka. Ny loko mena dia tena voatonona ary manokana amin'ny sandry. Azonao atao ny mampifanaraka ny tatoatanao Jesosy tahaka ity iray ity.
14. Jesosy fanomboana an'i Jesoa amin'ny totozy ho an'ny lehilahy
Ireo lehilahy dia afaka maneho amim-pahasahiana ny fitiavany an'i Jesosy rehefa mitarika ny tarehiny amin'ny tsilo eny an-tsandriny.
15. Tafio feno an'i Jesosy tatoazy
Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia afaka aseho tanteraka amin'ny tanana. Manana ny fahefana hanapa-kevitra ianao hoe ahoana no tianao hijerena ny tatoazy.
16. Fitiavam-bolo manintona an'i Jesosy tato amin'ny tanana
Rehefa manampy ny loko sy voninkazo ho an'ny tatoazy Jesosy ianao, dia mahazo ny fiheverana mendrika azy. Na eny an-tsandriny, dia mbola mahagaga.
17. Tato anaty Jesosy
Ny fitaovam-piadiana dia mety ho toerana iray ahafahana maneho tsara ny tatoazy Jesosy.
18. Jesosy Tombokely momba ny Tombokely
Ireo lehilahy izay te-haneho ny tratrany amin'ny fanomboana an'i Jesoa dia afaka mandao ny tatoazy Jesosy eo amin'ny tratrany. Ny dikan'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty dia maneho an-kalalahana amin'ny tatoazy.
19. Mahatsiaro hevitra momba ny tatoazy ao amin'ny tratra i Jesosy
Ny tratra dia afaka miova amin'ny tatoavin'i Jesosy. Afaka manantena ianao fa ho tia ny fomba hanamboarana an'io tatoazy io.
20. Full Back Jesosy tato an-tonta
Na lehilahy na vehivavy ianao, ny tato-tehaka feno nataon'i Jesosy dia iray amin'ireo tsara indrindra azonao soratana, tsy misy ahiahy amin'ny fanesorana azy amin'ny ho avy tsy ho ela.
21. Tetikasa Super Tattoo ho an'ny ankizilahy
Misy sary maro momba an'i Jesosy azonao atao ao an-damosinao. Ny hafatra rehetra inoanao momba an'i Jesoa Kristy dia afaka asongadina tsara ao amin'ny lamosinao manontolo.
22. Teboka feno ny tato an-doha nataon'i Jesosy
Ny vehivavy dia afaka mandray ny tatoazy ho amin'ny ambaratonga manaraka rehefa manampy voninkazo manintona sy ny tatoazy Jesosy eo an-damosiny.
23. Tati-kevitra tato amin'ny Jesosy eo amin'ny tratra feno
Ny tratra sy ny tazo dia azo raisina avy amin'ny tatoazy Jesosy izay tonga amin'ny endrika samihafa.
24. Teteo ny tato -dika nataon'i Jesosy
Azonao atao ny maka ny tati-tarehin'i Jesosy ho amin'ny ambaratonga hafa raha manana ranomainty toy ity eo amin'ny vatanao ianao.
Tsy tianao ve ireo hevitra tato an-tato ho an'ny Jesosy ireo izay naseho teo amin'ny vatan'ny lehilahy sy ny vehivavy? Tena tsara tarehy izy ireo.
cat tattooshenna tattootattoos rahavavytattoos voronamasoandro tatoazyfitiavana tatoazytattoos footdiamondra tattoomozika tatoazytattoostattoo octopuskoi fish tattooraozy tatoazymehndi designtattoos mahafatifatylion tattooseagle tattoostatoazy fokoTattoo Featheranjely tattoostato ho an'ny vatofantsikaHeart Tattoostattoo ideastattoos armtattoos backnamana tattoos tsara indrindratattoo eyerip tattoosTatoazy ara-jeometrikacompass tattootattoos crossAnkle Tattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoos mpivadytatoazy lolomoon tattoostattoo watercolortratra tatoazyloto voninkazotatoazy voninkazotattoos ho an'ny lehilahyelefanta tatoazytanana tatoazytattoos sleevetattoostattoo cherry blossomarrow tattooscorpion tattooNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo infinity